I-Casa do Tejo - I-Airbnb
I-Casa do Tejo
Ifakwe kwindawo ezolileyo. Ifikeleleka ngeenyawo ngeRua Cega, esuka ePraça Alexandre Herculano, okanye ngeRua do Tejo.
Umthamo wokuhlalisa ukuya kwiindwendwe ezi-5. Ayifanelanga abantwana ngenxa yezitepsi ezingakhuselekanga.
Ngena kwaye ufumane ikhitshi kunye negumbi lokuhlala / lokutyela.
Nyuka kwizinyuko kwaye unegumbi lokuhlambela elixhotyiswe ngokupheleleyo phambi kwakho, kunye negumbi lokulala elikhulu ngasekunene. Ngoku ineebhedi ezimbini eziphindwe kabini; ilungele izibini kunye nabantwana aba-1 okanye aba-2. Okanye kubantu aba-4 "abanengqondo evulekileyo". Umabonakude wescreen esicaba, iwodrophu enezixhoma, ikhuselekile, jonga phezu koMlambo iTagus.
Umoya opholileyo uyaphola ehlotyeni kwaye ubushushu obuphakathi bubushushu ebusika.
Indawo: I-Rua Cega.
I-Rua Cega sesinye sezitrato zakudala apho kuphela iinqwelo eziza kujikeleza. Iqala ePraça Alexandre Herculano kwaye iya eRua do Tejo.
Kwimizuzu embalwa xa uhamba ngeenyawo uza kufumana amatye, iivenkile zokutyela, iindawo ezinembali neendawo ezinomtsalane. I-Casinha da Praça ikwindawo enembali yaseConstância, kufutshane nePelourinho.
Umlambo iZêzere udibana noMlambo iTagus umgama weemitha eziyi-40. Indawo yokupaka isimahla kwindawo kawonke-wonke.
Imidlalo yangaphandle efana neCanoeing, Ukukhwela amahashe, ukuhamba ngebhayisekile, ukunyuka intaba, ukunyuka intaba yenziwa eTejo okanye eZêzere, Ukuloba.
I-Zêzere inikezela ngolwandle lomlambo, ngaphantsi kweemitha eziyi-100.
Ikude ngeemitha ezimbalwa ziivenkile zokutyela eziliqela.
Ukuhlala ubuncinane iintsuku eziyi-2 kukwenza ufumane ivawutsha ye-10 Euro ukuze ufumane isaphulelo kwi-Pezinhos Esplanade eRio.
Idilesi echanileyo: Rua Cega, ecaleni kwezindlu zangasese zikawonke-wonke. NdiseCafe da Praça, ekumgama weemitha eziyi-30 (ngaphandle koLwesibini) phakathi ko-9 kusasa no-7 ebusuku. Nangona kunjalo, kwindawo yokungena (kwenye yeminyango yekhabhathi yasekhitshini, kufakwe abantu.
Idilesi echanileyo: Rua Cega, ecaleni kwezindlu zangasese zikawonke-wonke. NdiseCafe da Praça, ekumgama weemitha eziyi-30 (ngaphandle koLwesibini) phakathi ko-9 kusasa no-7 ebusuku…
Inombolo yomthetho: 80901/AL